माता लक्ष्मी रिसाउँदा घरमा देखिन्छन् यस्ता संकेत, भूलेर पनि नगर्नुहोस् बेवास्ता – Sandesh Press
September 29, 2021 121
काठमाडौँ । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धिमा बस्न चाहन्छ भने उसको लागि कतै न कतै यो आवश्यक हुन्छ कि माता लक्ष्मीको कृपा उसमा सँधै नै रहोस् र अधिकांश यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्।
जसले माता लक्ष्मीलाई खुशी पार्नका लागी कयौँ कामहरु गर्ने गर्दछन् । तर हामीलाई यो चिजमा ध्यान दिनुपर्दछ कि माता लक्ष्मीलाई के राम्रो लाग्दछ के चिजमा उनी खुशी हुन्छिन् र के चिजमा उनी दुखी हुन्छिन् त ?
आउनुहोस् यदि लक्ष्मी माता हामीसँग दुखी हुन्छिन् भने घरमा के लक्षण देखिन्छन् त ?
आउनुहोस् जब लक्ष्मी माता हामीसँग रिसाउने गर्दछन् तब घरमा कस्ता कस्ता चिजमा परिवर्तन देखिन्छन् त ? जब माता लक्ष्मी हामीसँग रिसाउँछिन् तब हाम्रो घरबाट सम्पन्नता हराउने गर्दछ । यी लक्षणहरू प्रायस् धेरै सामान्य हुन्छन् र हाम्रो जीवनमा पनि प्रभाव पार्ने हुन्छन्।
-घरमा रहेको मनी प्लान्ट अचानक सुक्न थाल्छ, यसको सुख्खाको अर्थ आफैमा स्पष्ट छ कि कतै समृद्धि तपाईंको घरबाट घट्दैछ। यसलाई माँ लक्ष्मीको क्रोधको चिन्ह पनि मानिन्छ।
-कुनै एक व्यक्तिको काँधमा, कम्मरमा वा काँखमा छेपारो खस्छ वा फेला पर्छ भने, यो पनि उही चीजको संकेत मानिन्छ र यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
-घरमा यदि साना साना बच्चाहरु जो बोल्न पनि सक्दैनन् त्यस्ता बच्चाले यदि कलम लिएर लाइन कार्ने थाले भने यो पनि यस्तै चिजको संकेत मानिन्छ। र यसलाई बेवास्ता गर्ने काम नगर्नुहोस्।
-यहाँ अर्को लक्षण पनि छ जुन यससँग सम्बन्धित छ र त्यो यो हो कि कागहरू दक्षिणको दिशामा तर्फमा मुख फर्काएर घरको बाहिर बसिरहेका हुन्छन्।काठमाडौँ । कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो जीवनमा सुख, शान्ति र समृद्धिमा बस्न चाहन्छ भने उसको लागि कतै न कतै यो आवश्यक हुन्छ कि माता लक्ष्मीको कृपा उसमा सँधै नै रहोस् र अधिकांश यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्।
-यहाँ अर्को लक्षण पनि छ जुन यससँग सम्बन्धित छ र त्यो यो हो कि कागहरू दक्षिणको दिशामा तर्फमा मुख फर्काएर घरको बाहिर बसिरहेका हुन्छन्।
Prevसाक्षात लक्ष्मीका स्वरुप मानिन्छन् यी राशिका युवती, आगमनसँगै हुन्छ घर स्वर्गसमान
Nextझुक्किएर पनि नसुत्नुहोस् यी ३ समयमा, नत्र रिसाउनेछिन् लक्ष्मी